စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု | DG ဆရာကြီး
အိမ် > စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု
ဉာဏ်ရည်မြင့်တယ်။ အရည်အသွေးက ပထမ
Dinggui showcase၊ သစ်ပင်ပန်းသမား၏ရည်မှန်းချက်
DG Showcase၊ လက်ရာမြောက်သောလက်ရာ။ အမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်၊ ၂၃ နှစ်ကြာ အဆင့်မြင့်ပြပွဲများ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါ။ China Showcase Industry Association ၏ ဥက္ကဌ ယူနစ်ဖြစ်သော DG Master of Display Showcase သည် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှု ဖြစ်လာပြီး အမှတ်တံဆိပ်ကို အကာအကွယ်ပေးကာ ယုံကြည်ရလောက်သော ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတင်းကို ရရှိထားသည်။
High-end သည် နောက်ခံမှ ဖြစ်သည်၊ DG Master of Display Showcase တွင် အတွေ့အကြုံ အနှစ် 20 ရှိသော သစ်သား လက်မှုပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိပြီး အလုံးစုံ အခြေအနေကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းချုပ်ကာ အသေးစိတ် စုံလင်မှု အားလုံးကို အာရုံစိုက် ပေးသည်။ DG Master of Display Showcase သည် အမှတ်တံဆိပ်ကို အနုပညာတစ်ခုအဖြစ် ပြသရန် ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းနှင့် လက်မှုပညာတို့ဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်ပြသမှုအတွက် အထူးအဆန်းအရသာနှင့် ထူးခြားသောဆွဲဆောင်မှုတို့ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ အဆင့်မြင့် ပြပွဲကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် အရည်အသွေး၊ ယုံကြည်နိုင်မှု၊ ဆန်းသစ်မှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့် ထာဝရကာလ၏ အဓိကအချက်ငါးချက်ကို ယူဆောင်ကာ သင့်အမှတ်တံဆိပ်ပုံသဏ္ဍာန်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် စီစဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်အား ဦးစားပေးအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စတိုးဆိုင်တစ်ခုလုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလုံး၏ အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ကာ သီးသန့်နှင့် စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို အလေးပေးကာ ဖောက်သည်များအား အပြိုင်အဆိုင် အားသာချက်များ ဆက်တိုက်ရရှိလာစေသည်။
360 ဒီဂရီ လှည့်ပတ်ကြိတ်ခြင်း။
ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ် 15 ခု
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းမှစတင်သော်လည်း DG အတွက်လာပါ။
အရောင်းပြခန်း လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လှပသော စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းအယူအဆကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ လှပသော အရောင်းဆိုင်အနုပညာကို ရရှိရန်အတွက် နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်စတိုင်၊ အရသာနှင့် ဂန္ထဝင်လက်ရာများကို ရည်ညွှန်းကာ၊
ပြတိုက်၏ တည်ရှိမှုသည် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ သက်တမ်း ရှည်စေရန်၊ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ အတွက် အကျိုးပြုရန် ဖြစ်သည်။
သိုလှောင်မှု နှင့် အနုပညာ ပေါင်းစပ်မှု ၊ အေးသော ပြကွက် သည် အပူချိန် ရှိသည် ၊ ကျောက်မျက် ရတနာ တွင် တောက်ပ မှု တိုးစေသည် ။
ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်း နှင့် လက်မှုပညာတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အနုပညာတစ်ခုလုံးသည် အမှတ်တံဆိပ်ပြသမှုများအတွက် အဆင့်အတန်းမြင့်သောအရသာနှင့် ထူးခြားသောကျက်သရေကို ဖန်တီးနိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းကို အနုပညာတစ်ခုဖြစ်လာစေပါသည်။
23 နှစ်တာကာလအတွင်း showcase စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်
Fortune 500 Enterprise Service Provider တရုတ်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်၊ China Showcase Industry Association ၏ ဥက္ကဌ ယူနစ်၊
ခိုင်ခံ့သော hardware စွမ်းအား
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောအကြီးစား ဟာ့ဒ်ဝဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ အဆင့်မြင့် CNC ညှပ်စက်၊ CNC ကွေးစက်၊ CNC အကြီးစား ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ပစ္စည်းများ ပါရှိသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပထမဆုံးသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကို အာမခံချက်ကွဲပြားကြောင်း သေချာစေရန် ပစ္စည်းများနှင့် ပုံစံများရွေးချယ်မှုအတွက် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိသောသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သော ဆေးသုတ်ခန်း၊ ပြာမှုန့်ကြိတ်စက် ပါရှိပါသည်။ သစ်သား၊ ဆေးနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ်တို့မှ တင်သွင်းသည်။ ပစ္စည်းများတင်သွင်း။
သင့်ဖောက်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၁။ ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းအဖွဲ့၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ဌာနခွဲ (အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာ၊ ပြကွက် ဒီဇိုင်နာ၊ ပျော့ပျောင်းသောအလှဆင် ဒီဇိုင်နာ၊ စျေးကွက်သုတေသီ၊ အမှတ်တံဆိပ်စီစဉ်သူ၊ လက်မှုဒီဇိုင်းပညာရှင်)
2. High-end&တစ်မူထူးခြားသော ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ခေတ်စားနေသောဖက်ရှင်ကို သင်ဦးဆောင်နိုင်ပါစေ။
3. ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်နာသည် သင့်အား ထိပ်တန်းမူရင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်၊ အမှတ်တံဆိပ်ကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အလုံးစုံအာကာသဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးရန်၊ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ၏ရှုထောင့်မှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
4. site ပေါ်တွင် အခမဲ့တိကျသောတိုင်းတာမှု၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပေးဆောင်ပါ။
5. အမှတ်တံဆိပ်အာကာသဒီဇိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါ။
6. ပုံဆွဲခြင်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်၊ 3D ပုံဆွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို 1:1 လျှော့ချပေးသည်။
အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများ ထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ထမ်း 500 နှင့် 18,000 sq.m. ထုတ်လုပ်မှုနေရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သည့်အရွယ်အစား ပရောဂျက်ကိုမဆို လွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်စေပါသည်။
DG ၏ ကြီးမားသော ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သင်စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် တစ်မျိုးတည်းသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် သင်နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ပျူတာအကန့်သည် လုပ်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် အပြုသဘောနှင့်အနုတ် 0.02 မီလီမီတာရရှိရန် utomatic touch ထိန်းချုပ်မှုကို ဖြတ်တောက်ပေးသည်၊
CNC ထွင်းထုစက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအပိုင်းအခြား - plexiglass ပစ္စည်း၊ သာမိုပလပ်စတစ်ပစ္စည်း၊ သစ်သားပစ္စည်း၊ အလင်းသတ္တုပစ္စည်း
မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် သတ္တုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်တောက်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သန့်စင်သောထုတ်လုပ်မှုဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော၊
အလိုအလျောက်အနားသတ်ကြိုးဝိုင်းစက် အလိုအလျောက်အစွန်းကြိုးဝိုင်းစက်၊ အလိုအလျောက်စာရွက်အစွန်း၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် အလှတရား
CNC စာရွက်သတ္တု V slot planer
CNC sheet metal V slot planer Precision metal V-slot ၊ တင်သွင်းသောစက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်အသုံးပြုမှု၊ တိကျမှုမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများ၊
လေးခေါင်းပတ္တာစက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ အဆင်ပြေပြီး ထိရောက်သော တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များ
CNC ညှပ်များကို သတ္တုကတ်ကြေးများ၏ အရည်အသွေးကို သေချာစေရန် တိကျမှု၊ မြန်ဆန်မှု၊ မြင့်မားသော တိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊
CNC ဟိုက်ဒရောလစ် ကွေးညွှတ်စက်သည် လျှပ်စစ်သံလိုက် တွန်းအားကို အသုံးပြု၍ သတ္တုကုန်ကြမ်းများသည် တိကျစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင် hardware workshop လုပ်ငန်းတွေ ရှိကြတယ်။
မူရင်းသတ္တုကို ဖြတ်တောက်ရန် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုတိကျပြီး တိုင်းတာမှုအမှားအယွင်းမရှိပေ။
CNC Shears စက်
CNC ကြိုးများကို သတ္တု၏အရည်အသွေးသေချာစေရန် တိကျသော၊ လျင်မြန်သော၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှုရှိသော စက်အား အတင်းအဓမ္မနေရာချထားခြင်း။
CNC စာရွက်သတ္တု V slot planer တိကျသောသတ္တု V-slot၊ တင်သွင်းသောစက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်အသုံးပြုမှု၊ မြင့်မားသောတိကျသောထုတ်ကုန်
အတွေ့အကြုံနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်တောက်ကျွမ်းကျင်မှု၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုချောမွေ့စေပြီး မည်သည့်အဆစ်မျှမဖြစ်စေပါ။
အစမ်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့် တိုင်းတာမှုများနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ အားလုံး ပြီးပြည့်စုံကြောင်း သေချာပါစေ။
ပြီးပြည့်စုံသော ပုံသွင်းခြင်းသေချာစေရန် သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းများကို အကြိမ်များစွာ မှန်ကန်စွာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ တွဲလုပ်ပါ။
360 ဒီဂရီ ပွတ်ပြီး မျက်နှာပြင် အားလုံးကို ချောမွေ့ ညီညာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
စမ်းသပ်ပြီး တိကျသော တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ သေချာပါစေ။
ဒီဇိုင်းဆွဲရန် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ကူညီပေးသနည်း။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် တစ်ဆိုင်လုံးရှိ ခင်းကျင်းပြသထားသော ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်ကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်ကနေစတင်, အာကာသ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေနေ။ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကို ဖျက်သိမ်းခြင်း။ နောက်ဆုံး Layout Solution ကိုရောက်ပါ။
Commercial space ဖြင့် brand culture ကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်။ ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ၏ရှုထောင့်မှ အလုံးစုံအာကာသဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်။ 3D Drawing အကျိုးသက်ရောက်မှု 1:1 လျှော့ချခြင်း။
Craft Drawing စီစဉ်ခြင်း။
ထုတ်ကုန်၏ဗဟိုပြု display space ကိုဖန်တီးပါ။ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောစက်မှုဒီဇိုင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်များ၏အတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်များနှင့် လူ့သဘောသဘာဝကို အဓိကအချက်အနေဖြင့် R&D ဒီဇိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
CNC ညှပ်များကို သတ္တုကတ်ကြေးများ၏ အရည်အသွေးကို သေချာစေရန် တိကျသော၊ မြန်ဆန်သော၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းသော၊
1၊ ငါးနှစ်အာမခံ၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပုံပျက်မသွားဘဲ တစ်သက်တာထိန်းသိမ်းမှု။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ကျော်လွှားပြီး သင့်ပြိုင်ဘက်များကို အလွယ်တကူ ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသော စတိုးဆိုင်ဖြေရှင်းချက်။
2、One-stop ရောင်းချပြီးနောက်ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား စိတ်ချ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်း သေချာစေရန်၊ သို့မှသာ သင် Dinggui ၏လေးစားဖွယ် 4S ဝန်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် သင့်အား စိုးရိမ်စရာကင်းကင်းဖြစ်စေပါသည်။
၃၊ တင်းကျပ်သော ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ သုံးစွဲသူများအား တင်းကျပ်သော ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး ကြီးကြပ်မှု၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ မရပ်မနား ပြန်လည်လည်ပတ်မှုများ ပေးဆောင်ရန်။
4၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပေးပို့မှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုပ်ပိုး။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် တပ်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အကောက်ခွန်ကြေငြာချက်နှင့် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာရနိုင်ရန် တစ်နေရာတည်းတွင် ကူညီပေးသည်၊ သင်သည် ကုန်စည်လက်ခံရရှိမှုကို စောင့်ရန်သာလိုသည်။
+86 13610079233 မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပါ။
အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ လာရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ။
12 အကြီးတန်း ဒီဇိုင်နာသည် သင့်အတွက် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကို ပြုလုပ်ပေးသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်များအပြင်
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ပြီးပြည့်စုံသော ဖန်သားပြင်ပြခန်းကို ယူဆောင်လာပါ။
အပြည့်အဝရောင်းချသောဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား စိတ်သက်သာရာရစေပါသည်။
DG Master of Display Showcase သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအပေါ်တွင် ဆန်းသစ်သော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ သွက်လက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို ဗဟိုပြုသည့် လက်လီစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Interational standard packing
မိုဒမ်ဂိုဒေါင်၊ ကွန်တိန်နာများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ထုပ်ပိုးမှုများအတွက် auiay ပစ္စည်းများ၏ intemational standardization ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အတွင်းနှင့်အပြင်တွင် 6-layer အကာအကွယ်ကို အမှန်တကယ်ရရှိစေသည်။
ထိရောက်သော ဘေးကင်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်
မြင့်မားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအာမခံကို ပေးဆောင်ရန် ထိရောက်ပြီး ဘေးကင်းသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှု၊ GPS ခြေရာခံခြင်းဖြင့် သင့်အား တိကျသောအချက်အလက်များကို သိနိုင်စေကာ စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး စျေးနှုန်းအားသာချက်ကို အာမခံနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင် အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသူ
ကုမ္ပဏီသည် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်များအနီး စီးပွားရေးဇုန်တွင် တည်ရှိသည်။ အချိန်မီ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီနှင့် ရေရှည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
သင့်ဖြေရှင်းချက်ကို အချိန်မှန်နှင့် ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှ အရောက်ပို့ပေးကြောင်း သေချာစေမည့် အတွေ့အကြုံရှိသော မန်နေဂျာများ၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဒီဇိုင်နာများနှင့် လက်မှုပညာသမားများကို ဝယ်ယူသူတိုင်းကို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ ခန့်အပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် တပ်ဆင်လမ်းညွှန်နှင့်အတူ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ပုံများသည် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တတ်သိနားလည်နိုင်သော သုံးစွဲသူ ကိုယ်စားလှယ်များသည် တပ်ဆင်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကို 24/7 ရိုးသားစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပြီးနောက်အဖွဲ့သည် ၂၄ နာရီအွန်လိုင်းတွင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့တွေ့ဆုံပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်နည်း